Dopamine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (2012) ၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်စနစ်ကလှုပ်ရှားမှု modulates - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
Dopamine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (2012) ၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်စနစ်ကလှုပ်ရှားမှု modulates
Neuropsychopharmacology ။ 2012 ဇွန်; 37 (7): 1729-37 ။ Doi: 10.1038 / npp.2012.19 ။ EPub 2012 မတ်လ7။
Oei နယူးယော့, Rombouts လုပ် SA, Soeter RP, ဗန် Gerven JM, နှစ်ဦးစလုံး S.
ဦးနှောက်အဘို့အ Leiden Institute နှငျ့သိမှတ်ခံစားမှု-LIBC, Leiden တက္ကသိုလ်, Leiden, အဆိုပါနယ်သာလန်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Dopaminergic ဆေးသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုသတိရှိရှိလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသည်။ ၎င်းသည် hypersexuality ကဲ့သို့သောထကြွလွယ်သောအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများအရလိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုမသိစိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စေသောတင်ပြမှုသည်ဆုလာဘ်စနစ်၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သော ဦး နှောက်areasရိယာများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ကိုပြသခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာက dopamine လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု subconscious အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းထိုကဲ့သို့သောနျူကလိယ accumbens အဖြစ်ဆုလာဘ်စနစ်၏သော့ချက်ဒေသများရှိ activation modulates ကြောင်းတွေးဆခဲ့သည် ငယ်ရွယ်သောကျန်းမာသောယောက်ျားများ (n = 53) ကိုကျပန်းစမ်းသပ်စမ်းသပ်သည့်အဖွဲ့နှစ်ခုသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသရန်အဖွဲ့တစ်ခုတွင်တာ ၀ န်ပေးခဲ့သည်။ dopamine ရန်သူ (haloperidol)၊ ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းဖြင့်သူမအပေါ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်နောက်ပြန်မျက်နှာဖုံးကာတာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ haloperidol သူတို့အားဒေသများရှိ activation လျော့နည်းသွားသော်လည်းရလဒ်များ, levodopa သိသိသာသာ subliminal လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပြသသောအခါ, levodopa သိသိသာသာ nucleus accumbens နှင့် dorsal anterior cingulate အတွက် activation တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Dopamine သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမရရှိနိုင်သည့်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့်အနေဖြင့်“ လိုချင်ခြင်း” ကိုထိန်းချုပ်ရန်စဉ်းစားသောဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုများကိုတိုးမြှင့်စေသည်။ ဆုချီးမြှင့်မှု၏ဤအပြေးပြေးစတင်ထိုကဲ့သို့သော hypersexuality နှင့် dopaminergic ဆေးဝါးကိုလက်ခံရရှိသူလူနာအဖြစ်မသင်မနေရဆု - ရှာကြံအပြုအမူနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဆုလာဘ်များ၏ဆွဲရှင်းပြလိမ့်မယ်။
လိင်ဆန္ဒများရှိခြင်းသည်အရေးကြီးသောမျိုးပွားမှုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော်လည်းလိင်ဆန္ဒပြင်းထန်သောလိင်ဆန္ဒ၌အလွန်အကျွံဖြစ်လာသောအခါ၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားသောအပြုအမူများဖြစ်စေနိုင်သည်။ Hyperactive လိင်ဆန္ဒသည်သိသိသာသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲမှုတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အလွန်နည်းပါးသောလိင်ဆန္ဒကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းတရားများနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာသိရှိရပြီး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏အခြေခံယန္တရားများကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသည် hypersexuality ကိုနားလည်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းအားကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာကုသမှုများကိုလမ်းညွှန်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုမော်ဒယ်များအရ, လိင်လှုံ့ဆျောမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (မက်လုံးပေး) အားဖြင့်လိင်တုံ့ပြန်မှုစနစ်၏ activation ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်အဆိုတော်နှင့် Toates, 1987; Stewart က, 1995; Agmo, 1999; နှစ်ခုလုံး et al, 2007) ။ neurotransmitter များနှင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ neurotransmitter များနှင့်ဟော်မုန်းအဆင့်များကတည်းဖြတ်သည့်လိင်စနစ်၏အထိခိုက်မခံမှုသည်လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုပေါ်ထွက်လာရန်လိုအပ်သည်။ မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုပုံစံများအရလိင်လှုံ့ဆော်မှုသည်လိင်ဆန္ဒနှင့်အပြုအမူများကိုဖော်ထုတ်ရာတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အရေးကြီးသောမေးခွန်းတစ်ခုမှာအထူးသဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများခံစားနေရသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသည်အချို့သောသူများ၏ဆန္ဒများကိုချဲ့ကားပြောဆိုခြင်း (သို့) အခြားသူများကိုမလွှမ်းမိုးစေခြင်းဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်။
ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopaminergic ကုထုံးသည် hypersexuality နှင့်အလွန်အကျွံစျေး ၀ ယ်ခြင်း၊ punding သို့မဟုတ်လောင်းကစားတို့ကဲ့သို့ပုံမှန်မဟုတ်သောကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်စေသည့်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရအရေးကြီးသော neurobiological ဆက်နွယ်မှုကို aberrant လိင်မှုဆုလာဘ်ရှာဖွေခြင်းအပြုအမူနှင့် dopamine (DA) ကြားတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် (အီဗန် et al, 2009) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါကုသသောလူနာများအတွက်စိတ်မဆုပ် - ထိုးခြင်းအပြုအမူများသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုအတွက်အဆိုပြုထားသည့်အလားတူဆုလာဘ်များနှင့် dopaminergic sensitization ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရန်တွေးဆထားသည်။Robinson နဲ့ Berridge, 1993) ။ ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်လိင်အဖြစ်မူလတန်းအကျိုးကျေးဇူးများ, ဒါပေမယ့်ပိုက်ဆံအဖြစ်အလယ်တန်းဆုလာဘ်နှစ်ခုလုံးကိုအသိပညာအပြောင်းအလဲနဲ့, များသောအားဖြင့် '' ဆုလာဘ်စနစ် '၏ဗဟို ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနျူကလိယ accumbens (NAcc) တွင်တိုးမြှင့ activations နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ DA system ကို NAcc ထဲသို့လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဤစနစ်ကိုမောင်းနှင်သည် (Kringelbach နှင့် Berridge, 2009), ဤလှုံ့ဆော်မှု '' လိုလား 'အောင်, တစ်မက်လုံးပေး salience နှင့်အတူလှုံ့ဆော်မှုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည် (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998) ။ အဆိုပါမက်လုံးပေး sensitization သီအိုရီ dopaminergic အာရုံကြောလိုက်လျောညီထွေ၏ရလဒ်အဖြစ် DA စနစ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလှုံ့ဆော်မှုမှ hyper အထိခိုက်မခံဖြစ်လာသည်သောအလှည့်အတွက် hypersalient ဖြစ်လာ
အကြိုက်တိုး, ဒါပေမယ့်တိုးမြှင့် '' လို '' အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီသီအိုရီနှင့်အညီ, ဆုလာဘ် -related တွေကိုထိတွေ့မှုအပြီးတွင် ventral striatum အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်လည်းတစ် ဦး ချင်းအားနည်းချက်ဖြစ်လာမှတစ် ဦး ချင်းအားနည်းချက်အကြံပြုထားတဲ့ impulsive-compulsive အပြုအမူတွေမပါဘဲပါကင်ဆန်လူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, Impulsive-compulsive အပြုအမူနှင့်အတူပါကင်ဆန်လူနာအတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည် (O'Sullivan et al, 2011).
သတိဆုချီးမြှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ dopaminergic မော်ဂျူအစီရင်ခံခဲ့သည် (အချစ် et al, 2006; ရက်ရာဇာ et al, 2009) ။ 'Wanting' သည်သတိရှိရှိအတွေ့အကြုံရှိလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်စေသောရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်အပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအခြေခံသွယ်ဝိုက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2003) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုတင်ပြသည့်အခါအထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာအထူးသဖြင့်ပိုမိုသိသာထင်ရှားသည့်ဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များကိုအကဲဖြတ်နိုင်ပြီးသိမြင်မှုဆိုင်ရာမက်လုံးအားဖြင့်ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အရေးကြီးသောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆုလာဘ်စနစ်သည်လိင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သောအရာများအဖြစ်တုံ့ပြန်ပြီးဖြစ်သည်။Childress et al, 2008; Gillath နှင့် Canterberry, 2011) ။ သို့သော် DA သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုချခြင်းအတွက်သွယ်ဝိုက်သောလှုံ့ဆော်မှုကို modules ဟုတ်မဟုတ်မသိနိုင်ခြင်း၊ အစောဆုံးအစတွင်ပြင်ပအသိအမြင်ရှိခြင်း။
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ထို့ကြောင့် DA မသိစိတ်တစ်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှဆုလာဘ်စနစ်၏တုံ့ပြန်မှု modulates ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ DA agonist ဖြင့် DA အဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ DA antagonist ဖြင့် dopaminergic tone ကိုတားစီးခြင်းသည်အကျိုးကျေးဇူးရှိသည့်စနစ်၏ ဦး နှောက်ဒေသများတွင်အထူးသဖြင့် NAcc, caudate, insula, thalamus, orbitofrontal cortex (OFC) တွင်လျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ နှင့် dorsal anterior cingulate (dACC) (Haber နှင့် Knutson, 2010).
Erectile Function ၏အညွှန်းကိန်း (IIEF; နှင်းဆီပန်း et al, 1997အမ်စတာဒမ်အတ္ထုပ္ပတ္တိအင်တာဗျူး (ဆုံးဖြတ်ချက်အရ) သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ (Wild, 1963) နှင့် MINI International Neuropsychiatric Interview (MINI; Sheehan et al, 1998);
haloperidol သို့မဟုတ်အန္တရာယ်များကိုညွှန်ပြသည့်ရောဂါ (သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်း)
levodopa (ဥပမာ၊ နှလုံးရောဂါ၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ သိုင်းရွိုက်ရောဂါ၊
psycho-pharmacological ၏မကြာသေးမီကအသုံးပြုမှု (<ပါဝင်မှုမတိုင်မီ 12 ပတ်)
စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သောဆေးများ (သို့) ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည့်ဆေးဝါးများ
haloperidol သို့မဟုတ် levodopa (ဥပမာ, ဆေးခြောက်သို့မဟုတ်ကိုကင်း) ။
စုစုပေါင်းပါဝင်သူ ၅၅ ဦး ကိုစမ်းသပ်အုပ်စု ၃ ခုအနက်မှတစ်ခုသို့ကျပန်းတာဝန်ပေးခဲ့သည်။L-dopa, haloperidol, ဒါမှမဟုတ် placebo) ကျပန်း, မျက်စိကန်း - နှစ် ဦး ကိုစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းအတွက်။ သင်တန်းသားများကို 100 ၏သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည် 25 နှင့်အတူပေါင်းစပ်မီလီဂရမ် levodopa carbidopa ၏မီလီဂရမ် (Sinemet, Tmax ကို= 45 မိနစ်ဝက်အချိန် = 1-2 h; Sagar နှင့် Smyth, 2000; Khor နှင့် Hsu, 2007), သို့မဟုတ် haloperidol (3 မီလီဂရမ်, Tmax ကို= 3-6 ဇ, ဝက်အချိန် = 14-36 h; မီဒါ et al, 1989; Liem-Moolenaar et al, 2010),
သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၌ PET လေ့လာမှုတစ်ခုက၎င်းကိုပြသခဲ့သည်
Sinemet ၏တစ် ဦး တည်းဆေးထိုး putamen နှင့် caudate 1 အတွက် DA အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲစေပါသည် စားသုံးပြီးနောက် (Kumakura et al, 2004) ။ အလားတူစွာ haloperidol အဘို့, ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် PET လေ့လာမှု 60-70% D2 အဲဒီ receptor ထေို3ပြသခဲ့သည် အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက် (Nordstrom et al, 1992).
ပါဝင်သူများနှင့်စမ်းသပ်သူနှစ် ဦး စလုံးသည်နှိုင်းယှဉ်သို့မဟုတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ဘူး
မူးယစ်ဆေးဝါး။ ကျပန်းဆေးရုံဆေးဆိုင်ကထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို
ပါ ၀ င်သူကလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအသိပေးသဘောတူညီမှုကိုမည်သည့်လျှို့ဝှက်ချက်ပေးသည်၊
အဆိုပါလေ့လာမှုကို Leiden ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့သည်
ဟယ်လ်စင်ကီကြေငြာချက် (ဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာချက်, 2000).
ပါဝင်သူတစ် ဦး မှာပြင်းထန်သောကြောင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှဖယ်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပါဝင်သူတ ဦး တည်းဝင်ပြီးနောက်ကျဆင်းသွားသည်
စကင်နာအခန်း။ နောက်ဆုံးနမူနာအရှင် 53 သင်တန်းသားများကိုပါဝင်သည်
(ကြည့်ရှု စားပွဲတင် 1 အသက်အရွယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်းများ၊ ရမှတ်များပေါ်တွင်အုပ်စုတစ်ခုစီ၏ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ variable များအတွက်ရမှတ်များ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကို Symptom Checklist-90 ဖြင့်စစ်ဆေးသည်။Arrindell နှင့် Ettema, 1986); အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတားစီးမှုအပြုအမူဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစကေးရမှတ်နှင့်အတူအကဲဖြတ်အဖြစ်အမူအကျင့်တားစီး (Carver နှင့်အဖြူ, 1994); Barratt Impulsenessale Scale ကို သုံး၍ ထကြွလွယ်သောရမှတ်များ ()Patton et al, 1995); နှင့်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးချိန်ခွင်နှင့်အတူတားစီး (Janssen et al, 2002); နောက်ဆုံးတွင်လိင်မှုနှိုးဆွမှုညွှန်းကိန်းကို သုံး၍ လိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်း (Hoon နှင့် Chambless, 1998)) ။
ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးနှင့် ANOVA ရလဒ်များ၏အဓိပ္ပာယ် (M) နှင့်စံသွေဖီမှု (SD)
fMRI scanning တွင်ပါဝင်သောနောက်ပြန်ဖုံးကွယ်ထားသောအလုပ်ကိုပြသခဲ့သည်
(၁၆၀) ခုကိုစမ်းသပ်မှု (၁၆၀) ခုအနက် (၄) ခုမှလိင်၊
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနုတ်လက္ခဏာ, ကြားနေနှင့် fixation ။ တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးတစ် ဦး နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်
26 တစ်ကြာချိန်နှင့်အတူပစ်မှတ်ရုပ်ပုံ ဒေါ်။ (33 ၏ကြာချိန် ms ကိုဤ paradigm တွင်ယေဘူယျအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ Carlson et al, 2010; Childress et al, 2008),
နှင့် 'မမွငျ' 'စဉ်းစားသည်။ သို့သျောလညျး, ငါတို့ကြောင်းရှေ့ပြေးလေ့လာမှုမှာသတိပြုမိသည်
အထူးသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနေဆဲ 33 မှာရှာဖွေတွေ့ရှိဖြစ်ကြသည် 26 မှာသော်လည်းကြာချိန် ms ဒေါ်,
အခွင့်အလမ်းအဆင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ) ပစ်မှတ်ကိုချက်ချင်းမျက်နှာဖုံးဖြင့်လိုက်သည်။
အရာအမြဲတမ်းကြားနေရုပ်ပုံ (ကြာချိန် = 474) ဖြစ်ခဲ့သည် ဒေါ်)။ ကျပန်းကြာချိန်နှင့်အတူ 0.5 နှင့်2အကြားမီးခိုးရောင် fixation လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖေါ်ပြခြင်းတစ်ခုကြားဖြတ်ကြားကာလရှိခဲ့သည် မတည်မငြိမ်ဖြမ်အဘို့အ s ကိုကြည့်ပါ ပုံ 1).
ပစ်မှတ်များသည်အမြင်အာရုံအသိအမှတ်ပြုခြင်းမှလွတ်မြောက်ပြီး 'မသိစိတ်' ကိုဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ကြားနေနှင့်
ထိရောက်သောရုပ်ပုံစနစ် (IAPS) (lang et al, 2001),
ကိုးမှတ် Likert SAM အပေါ်အခြေခံပြီး valence နှင့်နှိုးဆော်ချက်၏ ratings စကေး
(ကြားနေပစ်မှတ်များ M - SD: valence = 5.13 ± 1.24; arousal = 3.07 ± 1.97;
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနုတ်လက္ခဏာပစ်မှတ်များ: valence = 2.04 ± 1.44; arousal = 6.18 ± 2.27;
ကြားနေမျက်နှာဖုံးများ: valence = 5.04 ± 1.30; arousal = 3.03 ± 1.86) ။ ကြားနေပစ်မှတ်
ယခင်က sexology သုတေသနတွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပုံဖော်ထားသည်
လိင်ကွဲလိင်တူဆက်ဆံခြင်းအခြေအနေတွင်အဝတ်အချည်းစည်းသို့မဟုတ်အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောလူသားများ (Spiering et al, 2003; နှစ်ခုလုံး et al, 2004).
စမ်းသပ်မှုပေါင်း ၁၆၀ ကိုလေးခုမှ 160-ms ပစ်မှတ်များပါ ၀ င်သည်
အမျိုးအစား (လိင်၊ စိတ်ခံစားမှုအရအနုတ်လက္ခဏာ၊ ကြားနေ၊ လူကိုပုံဖော်ထားသည့်) နှင့်
၄၇၄- ms ကြားနေ (သက်မဲ့ရုပ်ပုံများ) ဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းခံရသော fixation) ။ အောက်မှာ
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်6မိ။
Stimuli များကို back-projected, 800x600 pixel resolution ဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်
စကင်နာ၏အဆုံး၌တည်ရှိသည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် LCD projector မှတဆင့်သယ်ဆောင်သွားသည်
ဦး ခေါင်းကွိုင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်မှန်မှတဆင့်။ လှုံ့ဆော်မှု software ကို (E- ချုပ်။ )
၁.၂; စိတ်ပညာဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိရိယာများကိုလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
သင်တန်းသားများကိုသတိရှိရှိ detect လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကြောင်းအတည်ပြုရန်
မျက်နှာဖုံးရှေ့မှာ, ကြားနေ, လိင်, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့သည်
ပုံရိပ်တစ်ခု3အပေါ်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည် T-Philips Achieva MRI စကင်နာ (Philips, Best, နယ်သာလန်) သည် 8-channel SENSE ခေါင်းစီးကွိုင်ကိုအသုံးပြုသည်။ တစ် ဦး စံ T1အလေးချိန်
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသံအတိုးအကျယ်နှင့် high-resolution gradient ကိုပဲ့တင်သံပြိုပုံရိပ်
(EPI) scan ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါကာလအတွင်း fMRI သည်
နောက်ပြန်ဖုံးကွယ်ထားသောအလုပ်, T2*Bold ဆန့်ကျင်ဘက်မှအထိခိုက်မခံ -weighted gradient ကို EPI ကို axial ဦး တည်ချက် (ပဲ့တင်သံအချိန် 30) တွင်ရရှိသောခဲ့ကြသည် ms, ထောင့်လှန် 80 °, isotropic voxels 2.75 မီလီမီတာ, 0.25 မီလီမီတာအချပ်ကွာဟမှု, 38 ချပ်, အထပ်ထပ်အချိန် 2.2 s ကို) ။
ဆိုက်ရောက်သောအခါစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေး။ , ခဲ့ကြသည်
အသိပေးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်ခဲ့သည်။ levodopa အထွတ်အထိပ် - ပလာစမာရောက်ရှိသောကြောင့်
1 အတွင်းအာရုံစူးစိုက်မှု haloperidol က၎င်း၏အထွတ်အထိပ်4ရောက်ရှိသော်လည်းစားသုံးမှုပြီးနောက်ဇ စားသုံးပြီးနောက် h, သင်တန်းသားများကိုအစဉ်အမြဲနှစ်ခုဆေးတောင့, ပထမ4စား ဇနှင့်ဒုတိယ 1 h
fMRI စစ်ဆေးခြင်းမပြုမီအထွတ်အထိပ် - plasma ၏တစ်ပြိုင်နက်တည်းသေချာစေရန်
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းနှစ် ဦး စလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ပြင်းအား။ ပါဝင်သူခဲ့လျှင်
ဒုတိယဆေးတောင့် levodopa ပါရှိသည်သော်လည်း။ haloperidol အုပ်စုထဲမှာ,
ပထမဆေးတောင့်၌ haloperidol ပါရှိသည်
placebo ပါရှိသည်။ ရလဒ်များအရအိပ်မပျော်သောအုပ်စုတွင်နှစ်ကြိမ်ပေးရလေ့ရှိသည်
လည်း အချစ် et al (2006) နှင့် ရက်ရာဇာ et al (2009) ဒီအုပ်ချုပ်ရေး protocol ကိုသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးဆေးတောင့်ကိုသောက်ပြီးနောက်သင်တန်းသားများသည်မေးခွန်းလွှာများကိုဖြည့်စွက်ခဲ့ကြသည် (ကြည့်ပါ စားပွဲတင် 1) ။ ဒုတိယဆေးတောင့်ကိုသောက်သည့်တိုင်အောင်သူတို့ကိုစာဖတ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ အတိအကျ 1 ဒုတိယဆေးတောင့်ကိုစားပြီးနောက် h စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများ
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အတင်းအဓမ္မ - ရွေးချယ်မှုအမျိုးအစားတာဝန်။ ထို့နောက်ထွက်ပေါက်အင်တာဗျူး
စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ပတ်သက်။ ခံစားချက်။ နောက်ဆုံးတော့
လာမည့် ၂၄ ရက်တွင်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှရှောင်ရှားရန် h.
FMRI ၏အချက်အလက်များအား FEAT (FMRI Expert Analysis Tool) ဗားရှင်း ၄.၁၊ FSL ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (FMRIB ၏ဆော့ဝဲလ်စာကြည့်တိုက်၊ www.fmrib.ox.ac.uk/fsl။ အောက်ပါကြိုတင်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုအသုံးပြုခဲ့သည် - ရွေ့လျားမှုကိုပြုပြင်ခြင်း (Jenkinson et al, 2002); ဦး နှောက်မဟုတ်သောဖယ်ရှားရေး (Smith က 2002); FWHM 8 ၏ Gaussian kernel ကိုအသုံးပြုပြီး Spatial smoothing မီလီမီတာ;
တစ် ဦး ကသတ်မှတ်ထားတစ်ခုလုံးကို 4D ဒေတာ၏ခမ်းနား - ယုတ်ပြင်းထန်မှုပုံမှန်
တစ်ခုတည်းမြှောက်ကိန်းအချက်; high-pass ယာယီ filtering ကို
(Gaussian-weighted အနည်းဆုံးနှစ်ထပ်ကိန်းဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းနှင့်အညီ၊ σ= 50.0 s) ။ အချိန် - စီးရီးစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဒေသခံ autocorrelation ဆုံးမခြင်းနှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်Woolrich et al, 2001).
FMRI EPI အချက်အလက်များကို high-resolution EPI scan တစ်ခုစီတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်
တစ် ဦး ချင်းစီ T1-weighted မှမှတ်ပုံတင်ခဲ့သောပါဝင်သူ
ပုံစံခွက် (Jenkinson နှင့်စမစ်, 2001; Jenkinson et al, 2002).
လေးရှင်းလင်း variable တွေကို (EVs) အထွေထွေ linear တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်
ပစ်မှတ်အမျိုးအစားလေးမျိုးကိုကိုယ်စားပြုသည့်မော်ဒယ်လ် - ကြားနေ (နီယို၊ လိင်)
(လိင်)၊ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအနုတ်လက္ခဏာ (အနုတ်) နှင့်ပြုပြင်ခြင်း (Fix) ကိုအချိန်တိုင်းပိတ်ထားသည်
မျက်နှာဖုံးကိုထေမိသည်အထိပစ်မှတ်စတင်ခြင်းရန်။ တစ်ခုချင်းစီကို EV တစ် ဦး နှင့်အတူ convolved ခဲ့သည်
များအတွက်အကောင့်မှနှစ်ဆ gamma hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကို
hemodynamic တုံ့ပြန်မှု။ အကျိုးစီးပွားနှိုင်းယှဉ်လိင်ခဲ့ကြသည် vs ပြင်; Neg vs Fix; လိင် vs Neu; နှင့် Neg vs Neu ။ ဦး နှောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုအတွက်၊
ရောစပ်ထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ FLAME (FMRIB ၏ဒေသတွင်းဆန်းစစ်ချက်) ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
ရောနှောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ) (Woolrich et al, 2004; Beckmann et al, 2003) ။ အဓိကတာ ၀ န်သက်ရောက်မှုများကိုဆုံးဖြတ်ရန်၊ အုပ်စုလိုက်တာ ၀ န်မခွဲခြားဘဲနမူနာတစ်ခု t-test ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး Z (Gaussianized ဖြစ်သည် T) စာရင်းအင်းပုံရိပ်များ၏ကန ဦး စပျစ်သီးပြွတ် - ဖွဲ့စည်းတံခါးခုံအားဖြင့်တံခါးခဲ့ကြသည် Z> 2.3 နှင့်တစ် ဦး (တညျ့) စပျစ်သီးပြွတ်အရေးပါမှုတံခါးခုံကို p= 0.05 ။
ထို့နောက် linear ဆနျ့ကငျြ (levodopa> ရလဒ်များအရအိပ်ယာ> haloperidol) ဖြစ်ခဲ့သည်
လွတ်လပ်သော ROI ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်အတူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းအားဖြင့် Z- ပြည်နယ်
လုပ်ငန်းလေးခု၏ပုံရိပ်များသည်ယခင်ကစိတ် ၀ င်စားသောဒေသများနှင့်ခြားနားသည်
တံခါးပိတ်။ မျက်နှာဖုံးများသည် NAcc, insula, dACC ၏ binarized ပုံများဖြစ်သည်။
thalamus, OFC နှင့်ဟားဗတ် - အောက်စ်ဖို့ Cortical နှင့်ထံမှ caudate
Subcortical Probability Atlas သည် ၅၀% ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ အတွက်
dACC, ACC ၏မျိုးနွယ်အစိတ်အပိုင်း MNI ကိုသြဒီနိတ်မှာဖယ်ရှားခဲ့သည် y= 32 (မက်ကော်မစ် et al, 2006) ။ အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်သည် GRF သီအိုရီကို အခြေခံ၍ အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် p= 0.05 (Worsley၊ ၂၀၀၁).
(Fisher ရဲ့အတိအကျစမ်းသပ်မှု = 8.29, p= 0.16), မျက်စိကွယ်လုံလောက်သောခဲ့ကြောင်းအကြံပြုသည်။ သင်တန်းသားအများစုသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။n= 41) ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိခဲ့သူ ၁၂ ဦး အနက်အများဆုံးဖြစ်သည်
မူးဝြေခင်း, ဒါမှမဟုတ်ထူးဆန်းတဲ့ရူပါရုံကို။ အစီရင်ခံဘက်၌ကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်
အုပ်စုသုံးစုလုံးတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (Fisher ၏အတိအကျစမ်းသပ်မှု = ၃.၉၈၊ p= 0.42) ။
အတင်းအဓမ္မ - ရွေးချယ်မှုအမျိုးအစားဖော်ထုတ်ခြင်းအခွင့်အလမ်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြသခဲ့သည်
ပစ်မှတ်များကိုခွဲခြားရန် (ကြည့်ပါ) စားပွဲတင်2နည်းလမ်းများနှင့်စံသွေဖီသည်။ ) ထပ်ခါတလဲလဲ ANOVA ကို Group (haloperidol) ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည် vs ရလဒ်များအရအိပ်ယာ vs levodopa) အကြားဘာသာရပ်များအကြားအမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား (ကြားနေ၊ လိင်၊
အပျက်သဘောဆောင်သော) အတွင်း - ဘာသာရပ်များအချက်အဖြစ်နှင့်အဖြစ်တာဝန်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်
မှီခို variable ကို။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမသိသာရှိခဲ့သည်ပြသခဲ့သည်
(F (၁.၇၇; ၈၈.၄၅) = ၀.၂၉၊ p= 0.72, ဖန်လုံအိမ် - Geisser တညျ့) အုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (F (1, 50) = 0.08, p= 0.92) နှင့်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာ interaction က (F (3.53; 88.45) = 0.39, p= 0.79, ဖန်လုံအိမ် -Meisser တညျ့) ။
အတင်းအဓမ္မရွေးချယ်မှုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသည့်နည်းလမ်းများ (M) ရာခိုင်နှုန်းမှန်ကန်သောအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်စံသွေဖီခြင်း (SD)
လုံး ၀ ဦး နှောက်အားသုံးသပ်ခြင်း
မြင် ပုံ2ဆနျ့ကငျြလိင်အတွက်အလုပ်၏အဓိကသက်ရောက်မှုများအတွက် vs Fix ။ ဤဆန့်ကျင်ဘက်၌, အများအပြားပြွတ်သိသိသာသာ activated ခဲ့ကြသည်
insula, OFC နှင့် paracingulate gyrus နှင့်အခြားအရာများတွင်အထွတ်အထိပ်တန်ဖိုးများနှင့်အတူ
ထိုကဲ့သို့သော (bi) နှစ် ဦး နှစ်ဖက် occipital cortex အဖြစ် posterior ဒေသများ, (ကိုကြည့်ပါ စားပွဲတင်3သိသာထင်ရှားသောပြွတ်နှင့်ဒေသခံ maxima သည်။ အကြီးဆုံးစပျစ်သီးပြွတ်က၎င်း၏ရှိခဲ့ပါတယ်
အင်ဆူလာအထွတ်အထိပ်နှင့်တိုကျရိုကျကုထုံး cortices သို့တိုးချဲ့,
caudate, thalamus နှင့်နှစ်နိုင်ငံ NAcc ။ ယင်း၏အထွတ်အထိပ်နှင့်အတူတစ် ဦး ကစပျစ်သီးပြွတ်
paracingulate gyrus အဆိုပါ dACC အတွက်ဒေသခံ maxima လွှမ်းခြုံ။ ခြားနားချက်
လိင် vs Neu သိသာထင်ရှားသောပြွတ်ပြသခဲ့သည် စားပွဲတင် 3)
OFC တွင်, ယုတ်ညံ့နှစ် ဦး နှစ်ဖက် occipital cortex နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus,
အဆိုပါ insula အတွင်းဒေသခံ maxima နှင့် NAcc လွှမ်းခြုံ caudate အတူ။ ထဲမှာ
Neg နှင့်ခြားနားသည် vs Fix နှစ်ခုသိသာပြွတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်: တ
အဆိုပါ lingual gyrus နှင့်တိုကျရိုကျ operculum cortex ကနေတိုးချဲ့သောတ၌
လက်ဝဲ Insular cortex သို့။ အဘယ်သူမျှမသိသာထင်ရှားသောပြွတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်
Neg နှင့်ခြားနားသည် vs Neu ။ အဆုံးစွန်သောနှစ်ခုခြားနားချက်များကနေရလဒ်
အဆိုပါ (မျက်နှာဖုံး) လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု inducing အတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်
ဆုလာဘ် -related ဦး နှောက်ဒေသများရှိ activation ။
ဆန့်ကျင်ဘက်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုလိင်> Fix ။ မှတ်စု: (က) Coronal, (ခ) sagittal နှင့် voxels ၏ပြွတ်၏ (ဂ) axial အမြင် (Z> ၂.၃၊ pလိင်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ = 0.05, စပျစ်သီးပြွတ် - တညျ့ vs Fix (MNI ကိုသြဒီနိတ်များ၊ x, y, z= 3, 9, 1) ။ ဒီအတွက်ပြင်းထန်မှုတန်ဖိုးများ ...
Task ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုများ Cluster စာရင်း
လွတ်လပ်သော ROI ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်တကွ, linear ဆနျ့ကငျြဘ Group မှ
(levodopa> placebo> haloperidol) ကိုစစ်ဆေးရန်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်
DA activation အားဖြင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် DA တားစီးခြင်းဖြင့်နှိမ်နင်း။ လိင်၌ vs Fix, ဒီဆနျ့ကငျြဘသိသိသာသာဖြစ်ခဲ့သည်p<0.05, voxel- တညျ့) နှစ် ဦး စလုံး NAcc နှင့် dACC (ကြည့်ပါ ပုံ 3) ။ လိင်၌ vs သို့သော် linear ဆန့်ကျင်ဘက်သည် NAcc တွင်သိသာထင်ရှားသော်လည်းထူးခြားမှုမရှိပါ
အခြားအ ROIs ။ အဆိုပါအတွက် activation အတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်
ကျန်ရှိသောခြားနားချက်များအတွက် ROIs ။
ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်> Fix နျူကလိယ accumbens (NAcc) နှင့် dorsal anterior cingulate cortex (dACC) တွင် Fix ။ မှတ်စု: အဆိုပါတံခါးခုံ zstat မြေပုံ voxels ၏ coronal အမြင်ပုံဖော် (voxel အရွယ်အစား =2mm3 စံအာကာသအတွင်း) ကို linear အတွက်သိသိသာသာပိုပြီးတက်ကြွ ...
ဒီလေ့လာမှုက subconsciously ရိပ်မိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ် DA ၏ modulatory သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရ DA သည်သိပ္ပံနည်းကျရိပ်မိသည့်လိင်မှုနှိုးဆွမှုများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ဆုလာဘ်စနစ်၏အဓိက ဦး နှောက်နယ်ပယ်များဖြစ်သော NAcc နှင့် dACC တွင်လှုပ်ရှားမှုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဤရလဒ်သည် DA ၏လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုအစောဆုံးစတင်တွေ့ရှိနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေကိုညွှန်ပြပြီးသွယ်ဝိုက်လိင်ဆိုင်ရာဆုချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ဆေးဝါးဗေဒပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ပထမဆုံးသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များက ဦး နှောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အတွက်အချက်ပြနိုင်စွမ်းကိုအထူးသတိပြုမိသည်၊ သတိမထားမိသည့်တိုင် ventral striatum တွင်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖော်ပြသည့်အခြားအစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီသည်။Childress et al, 2008), thalamus နှင့် ACC (Gillath နှင့် Canterberry, 2011) ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု၏ subliminal တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်း။
အများအားဖြင့်သိသာထင်ရှားသည့်အချက်မှာ DA ၏ NAcc နှင့် dACC တွင်သက်ရောက်မှုများဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် linear connection ကို haloperidol, placebo, or levodopa ၏အုပ်ချုပ်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ NAcc သည်ဆုချီးမြှင့်မှုဗဟိုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ပြီး၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ငွေကဲ့သို့သောအလယ်တန်းဆုလာဘ်များပြုပြင်ခြင်းနှင့်မကြာခဏဆက်စပ်မှုရှိသည်။အာဆတ် et al, 2009; ကယ်လီ, 2004; လူယာ et al, 2003; အချစ် et al, 2006; ရက်ရာဇာ et al, 2009) နှင့်လည်းလိင်လှုံ့ဆော်မှု၏ (Walter et al, 2008) ။ DACC သည်များသောအားဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရပိုမိုသောဆက်နွယ်မှုရှိသည်
စိတ်ခံစားမှုဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူပိုပြီးလှုံ့ဆော်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် ventral ACC ၏သိမှုရှုထောင့်; မည်သို့ပင်ဆိုစေ dACC သည်အဓိကပံ့ပိုးသူဖြစ်သည်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့ (ထိရောက်သော et al, 2011) ။ dACC တွင်ပါဝင်သောအခန်းကဏ္ numerous များသည်များပြားသော်လည်း၊ ဘုံပိုင်းခြေမှာမူကန ဦး အာရုံခံအမြင်မှသည်မော်တာပြင်ဆင်မှုအတွက်သင့်လျော်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကဏ္ aspects အသီးသီးတွင်ယင်း၏အခန်းကဏ္ is ဖြစ်သည်။အာဆတ် et al, 2009) ။ dACC သည် NAcc နှင့် ventral putamen တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီး DA system နှင့်အတူဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စီရင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်အကြံပြုထားသည်။ အရင်းအမြစ်များကိုစည်းရုံးခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်လမ်းညွှန်သောအပြုအမူများစတင်ခြင်း၊ မော်တာtoရိယာသို့၎င်း၏စီမံကိန်းများနှင့် periaquaductal မီးခိုးရောင်ကိစ္စများမှတစ်ဆင့်လှုံ့ဆော်မှု ('လိုချင်ခြင်း') တွင်ပါဝင်သည်။အာဆတ် et al, 2009; Lonstein နှင့် Stern ပာ, 1998) ။ dACC သည်နှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကျောင်းသားတိုးပွားစေခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။Critchley et al, 2003, 2005) ။ ထို့အပြင် dACC မူမမှန်များကို obsessive-compulsive disorders, schizophrenia နှင့်စွဲလမ်းမှုများတွင်တွေ့ရသည်။Yucel et al, 2007a, 2007b, 2007c) ။ ဥပမာ dACC-NAcc ကွန်ယက်များ၌ DA စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်တိကျသောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုအားချို့ယွင်းစေရန်အကြံပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်မကောင်းသောစိတ်ဆန္ဒများကိုလိုက်စားခြင်းနှင့်ယခင်အမှားများမှသင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။အာဆတ် et al, 2009).
စိတ် ၀ င်စားစရာမှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ရှိလိင်မှုနှိုးဆွမှုများကိုတုန့်ပြန်မှုများသည်အုပ်စုလိုက်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူနှစ်နိုင်ငံရှေ့အင်ဆူလာတွင်သိသာထင်ရှားသောလှုပ်ရှားမှုများကိုပြသခဲ့သည်။Menon နှင့် Uddin, 2010) ။ အားဖြင့်မကြာသေးမီကမော်ဒယ်အရ Menon နှင့် Uddin (၂၀၁၀)၎င်းအင်ဆူလာသည်အဓိကအားဖြင့်အချက်အချာကျသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုမှတ်သားသည်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဥာဏ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အခြားကြီးမားသောကွန်ရက်များအကြားခလုတ်ခုံများ၊ ထိုလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆိုင်သောအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုများကို modulates နှင့်၎င်း၏မော်တာစနစ်သို့မြန်ဆန်စွာဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊ ACC ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များကိုပြုပြင်စဉ်ကသာအဓိကဆက်သွယ်ထားသောကွန်ယက်ကိုဖွင့်ထားခြင်းသည်၎င်းတို့၏အလွယ်တကူလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုပြသသည်။ ကြိုတင်လေ့လာမှုများတွင်အစောပိုင်းအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုနှင့်မော်တာပြင်ဆင်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုသွယ်ဝိုက်သောအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေသည်။Janssen et al, 2000; နှစ်ခုလုံး et al, 2008b).
အချို့သောစိတ်လှုပ်ရှားစရာများနှင့်အခြား DA အာရုံခံဆဲလ်များတွင်တားစီးနှေးကွေးမှုရှိသော်လည်း DA အာရုံခံဆဲလ်များသည်လည်းဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်လူသိများသည်။Bromberg- မာတင် et al, 2010) ။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအရ Aversive ပြည်နယ်များအားတုန့်ပြန်မှုအနေဖြင့်တိုတောင်းသောကန ဦး တိုးတက်မှုအပြီးတွင် DA သည်လျော့နည်းသွားပြီး၊Budygin et al, 2012; Cabib နှင့် Puglisi-Allegra, 2012) ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုတွင်မျက်နှာဖုံးစိတ်ခံစားမှုအပျက်သဘောလှုံ့ဆော်မှုများကိုတောင်မှ ventral striatum တွင်မပါ ၀ င်ခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
uncorrected activation အဆင့်အထိတံခါးခုံကိုလျှော့ချတဲ့အခါမှာ။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တော့ငါတို့ဟာမျက်နှာဖုံးစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအနုတ်လက္ခဏာရုပ်ပုံများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် amygdala activation ကိုရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။ Childress et al (2008) အလားတူနောက်ပြန်မျက်နှာဖုံးပါရာဒိုင်းအတွက်အလားတူဆန္ဒရှိရုပ်ပုံများကိုသုံးပြီးအနုတ်လက္ခဏာနှင့်ကြားနေဓာတ်ပုံများအကြား activation အတွက်မဆိုသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု detect မပြုခဲ့ပေ။ သူတို့ကအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိခြင်းထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်ပူပန်မှု proneness ကဲ့သို့သောအခြား variable တွေကို, နှင့်ဆက်စပ်သောကြီးမားသောအချင်းချင်းဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲကြောင့်ဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူမျက်နှာဖုံးများနှင့်မျက်နှာဖုံးများကို သုံး၍ လေ့လာမှုများသည် amygdala (ဥပမာ - Carlson et al, 2009) ။ သတိရှိရှိဖြင့်ရိပ်မိသည့်မျက်နှာများသည်ရှုပ်ထွေးသော aversive IAPS ပုံများထက်ပိုမိုအားကြီးသော amygdala ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်ဟုထင်ရသည်၊Britton et al, 2006) ။ မျက်နှာများသည်မျက်နှာကြက်ရုပ်ပုံများထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးပါသည်၊ သို့သော်ဤလေ့လာမှုအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်ပုံများသည်လိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများနှင့်ရှုပ်ထွေးသည်။ ဒါဟာစိတ်ခံစားမှုအနှုတ်လက္ခဏာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါစိတ်ခံစားမှုအပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုမှကြွလာသောအခါမျက်နှာဖုံးစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်ပါတယ်။ ချဉ်းကပ်ရန်ယေဘုယျက default သဘောထားကိုရှောင်ရှားရန်ရန်ထက်သာ။ ကြီးမြတ်ပါလျှင် (Cacioppo et al, 1997; Cacioppo နှင့် Gardner, 1999), ပထမ ဦး ဆုံးထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာဖုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကဲ့သို့အားနည်းအပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုပိုမိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်, အဆုံးစွန်သောသဘောထားကိုပိုမိုပြင်းထန်သောဆန့်ကျင်ဘက်အားလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် evoked စေခြင်းငှါသော်လည်း,
၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကကျနော်တို့ဒေသတွေမှာ DA-မှီခိုတိုးမြှင့်မှုတွေဟာမက်လုံးမက်လွန်းမှုတွေကိုထိန်းညှိဖို့စဉ်းစားထားတာတွေတိုးလာတာနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိမရှိမစုံစမ်းခဲ့ပါဘူး။
အလိုဆန္ဒနှင့်လိုချင်မှုအတွက်ဥပမာအားဖြင့်အပြုအမူဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုလမ်းကြောင်းများဖြင့်အကဲဖြတ်နိုင်သည်။ levodopa အုပ်ချုပ်မှုအောက်ပါလိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုချဉ်းကပ်ရန်တိုးမြှင့်သဘောထားတွေများအတွက်သို့သော်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် (နှစ်ခုလုံး et al, 2005) ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်သူတော်ကောင်းတရား၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောလှုံ့ဆော်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခါထိုကဲ့သို့သောအစီအမံများထည့်သွင်းသင့်သည်။ ထို့အပြင်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလေ့လာသည့်အခါအကျိုးကျေးဇူး၏နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။Klucken et al, 2009; နှစ်ခုလုံး et al, 2008a, 2008b) ။ DA မော်ဂျူလာနှင့်အတူ၎င်းသည်အကျိုးပြုသူများနှင့်တွဲဖက်သည့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများ၏မက်လုံးဖြစ်စေသောအကျိုးကိုမည်သို့သက်ရောက်သည်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ DA sensitivity အတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများ (Ben ဇိအုန်တောင် et al, 2006), လိင်အကြောင်းနှင့်အားဖြည့်လုပ်ငန်းစဉ်များမကြာခဏထိတွေ့မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်, ထစ်အငေါ့လိင်အလိုဆန္ဒများ၏စတင်ရှင်းပြလိမ့်မယ်။
DA- မှီခိုသောဆုလဒ်စနစ်၏“ အစပြုခြင်း” သည်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုအခြေအနေကိုလိုလားသူအဖြစ်သတိရှိရှိမကြုံတွေ့မီကပင်ဆုလာဘ်များ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ရုန်းကန်မှုကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ ။ ပါကင်ဆန်၏လူနာများတွင် dopaminergic ဆေးသောက်စဉ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနည်းသည့်ကုထုံးစဉ်အတွင်းလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုလျော့နည်းသွားသည့် schizophrenic လူနာများတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ဆက်ဆံမှုပိုမိုများပြားလာသောလူနာများတွင်ဤမသိစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စဉ်များသည်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် DA ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင်သွယ်ဝိုက်လိင်ဆိုင်ရာဆုချခြင်းအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်သင့်သည်။
Ilya Veer နဲ့ Michiel de Ruiter တို့ကိုသူတို့ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်အတွင်းမှတ်ချက်များနှင့်နှင့်အတူကူညီခြင်းအဘို့အ Olga Teutler
ဒေတာစုဆောင်းခြင်း။ SB နှင့် NO ကိုဥရောပမှထောက်ပံ့ငွေဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်
လိင်ဆိုင်ရာဆေးပညာအသင်း (ESSM) RS နှင့် SR တို့ကိုထောက်ပံ့ငွေဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်
နယ်သာလန်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့ (NWO) မှ
စာရေးသူမှ ၄ င်းတို့၏မူလတန်းမှရရှိသော ၀ င်ငွေများမှအပ၊
သုတေသနအတွက်သို့မဟုတ်ပြီးခဲ့သည့်3နှစ်အတွင်းမည်သည့်တစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်း entity သို့မဟုတ်
Agmo A. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု - လိင်အပြုအမူဖြစ်ပွားမှုကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အဖြစ်အပျက်များအားစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1999;105: 129-150 ။ [PubMed]
Arrindell WA, Ettema JHM ။ SCL-90 ။ Multidimensionele Psychopathologie-Indicator မှကိုင်တွယ်။ Swets & Zeitlinger BV: Lisse; 1986 ။
Assadi SM, Yucel M, Pantelis C. Dopamine သည်အားစိုက်မှုအခြေပြုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာကွန်ယက်များကိုပြုပြင်သည်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2009;33: 383-393 ။ [PubMed]
Beckmann CF, Jenkinson M က, Smith က SM ။ FMRI တွင်အုပ်စုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်အထွေထွေအဆင့်ဆင့် linear မော်ဒယ်လ်။ NeuroImage ။ 2003;20: 1052-1063 ။ [PubMed]
Zion IZ, Tessler R, Cohen L, Lerer E, Raz Y, Bachner-Melman R, et al ။
dopamine D4 receptor gene (DRD4) ရှိ Polymorphisms သည်အထောက်အကူပြုသည်
လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှု: အလိုဆန္ဒ, နှိုးဆွခြင်းနှင့်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;11: 782-786 ။ [PubMed]
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ ဆုချီးမြှင့်မှုအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္:မှာ - hedonic သက်ရောက်မှု၊ သင်ယူမှုဆုချခြင်း၊ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1998;28: 309-369 ။ [PubMed]
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ ဆုလာဘ် parsing ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2003;26: 507-513 ။ [PubMed]
S, Everaerd W, Laan E. 2007 နှစ်မျိုးလုံး။ Desire စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှထွက်ပေါ်လာ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်တစ် ဦး psychophysiological ရှုထောင့်ခုနှစ်တွင်: Janssen အီး (ed) ။လိင်၏ Psychophysiology အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်မှစာနယ်ဇင်း: ဘလင်တန်၊ 327-339.339 ။
S, Everaerd W, Laan E, Gooren L. Effect နှစ်ခုလုံးသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအပေါ် levodopa ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 173-183 ။ [PubMed]
S, Laan E, Spiering M, Nilsson T, Oomens S, Everaerd W. Appetitive နှင့်
အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏ aversive ဂန္အေးစက်။ J ကိုလိင် Med ။ 2008a;5: 1386-1401 ။ [PubMed]
S, Spiering M, Everaerd W, Laan E. လိင်အပြုအမူနှင့်တုန့်ပြန်မှု
ဓာတ်ခွဲခန်း - သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်။ J ကိုလိင် Res ။ 2004;41: 242-258 ။ [PubMed]
S, Spiering M, Laan E, ကြိုဆိုပါတယ် S, van den Heuvel B, Everaerd W.
လှုံ့ဆော်မှု။ J ကိုလိင် Med ။ 2008b;5: 100-109 ။ [PubMed]
JC၊ တေလာ SF၊ Sudheimer KD၊ Liberzon ၁. မျက်နှာမျက်နှာပြင်နှင့်ရှုပ်ထွေးမှု
IAPS ရုပ်ပုံများ - ဘုံနှင့်ကွဲပြားသောကွန်ရက်များ။ NeuroImage ။ 2006;31: 906-919 ။ [PubMed]
စိတ်လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုအတွက် Bromberg- မာတင် ES, Matsumoto M, Hikosaka O. Dopamine: ဆု, ဆန္ဒရှိနှင့်သတိပေး။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010;68: 815-834 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
EA၊ Park J၊ Bass စီဒီ၊ ဂရီနီဗစ်ခ်ျ VP၊ Bonin KD, Wightman RM ။ ဆုံ
လှုံ့ဆော်မှုကွဲပြားခြားနားဆုလာဘ်အတွက် subsecond dopamine လွှတ်ပေးရန်အစပျိုးလိုက်ခြင်း
တိုင်းဒေသကြီးများ။ neuroscience ။ 2012;201: 331-337 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cabib S, Puglisi-Allegra S. စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆိုင်သော mesoaccumbens dopamine ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2012;36: 79-89 ။ [PubMed]
Cacioppo JT, Gardner WL ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ Annu ဗြာ Psychol ။ 1999;50: 191-214 ။ [PubMed]
JT, Gardner WL, Berntson GG ။ စိတ်ကြွစိတ်ကူးတွေအပြင်
အစီအမံ: သဘောထားများနှင့်အကဲဖြတ်အာကာသ၏ဖြစ်ရပ်။ Pers Soc Psychol ဗျာ 1997;1: 3-25 ။ [PubMed]
JM, Greenberg T, Mujica-Parodi LR ။ မျက်စိကန်းသောဒေါသ ဒေါသကြီးလာတယ်
မျက်နှာဖုံးနှင့် unmasked မှပြောင်းလဲ amygdala တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်
ကြောက်မက်ဖွယ်မျက်နှာများ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2010;182: 281-283 ။ [PubMed]
Carlson JM, Reinke KS, Habib R. တစ် ဦး ကဘယ်ဘက် amygdala ကမကထပြုထားသောကွန်ယက်ကိုမျက်နှာဖုံးဖြင့်လျင်မြန်စွာလမ်းညွှန်ပေးသည်။ Neuropsychologia ။ 2009;47: 1386-1389 ။ [PubMed]
CS, အဖြူရောင် TL ။ အမူအကျင့်တားစီး, အပြုအမူ activation နှင့်
လာမည့်ဆုလာဘ်နှင့်ပြစ်ဒဏ်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောတုံ့ပြန်မှုများ - BIS / BAS
အကြေးခွံ။ J ကို Person Soc Psychol ။ 1994;67: 319-333 ။
AR, Ehrman RN, Wang Z, Li Y, Sciortino N, Hakun J, et al ။ နိဒါန်း
စိတ်အားထက်သန်မှု - 'မမြင်ရသော' မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအားဖြင့် limbic activation ။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2008;3: e1506 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
HD, Mathias CJ, Josephs O, O'Doherty J, Zanini S, Dewar BK, et al ။
လူ့ cingulate cortex နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု - ပေါင်းစည်းနေသည့် neuroimaging
နှင့်လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက်။ 2003;126: 2139-2152 ။ [PubMed]
Critchley HD, Tang J, Glaser: D, Butterworth B, Dolan RJ ။ အမှားနှင့်အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုကာလအတွင်း anterior cingulate လှုပ်ရှားမှု။ NeuroImage ။ 2005;27: 885-895 ။ [PubMed]
ဟယ်လ်စင်ကီကြေငြာချက် 52 WMA အထွေထွေညီလာခံ။ ဟယ်လ်စင်ကီကြေငြာချက် - Edinburgh၊ UK; 2000 ။
Etkin တစ် ဦး က, Egner T က, anterior cingulate နှင့် medial prefrontal cortex အတွက် Kalisch R. စိတ်ခံစားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2011;15: 85-93 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Stans M. Impulsive နှင့် compulsive အပြုအမူ Evans AH, Strafella AP, Weintraub D ။ MOV disorders ။ 2009;24: 1561-1570 ။ [PubMed]
Gillath အို Canterberry အမ် 2011 ။ subliminal နှင့် supraliminal လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိတွေ့ခြင်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှု Soc Cogn neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုDoi: Doi: 10.1093 / scan ကို / nrs065 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Haber SN, Knutson ခအဆိုပါဆုလာဘ်ဆားကစ်: မျောက်ခန္ဓာဗေဒနှင့်လူ့ပုံရိပ်ချိတ်ဆက်။ Neuropsychopharmacology ။ 2010;35: 4-26 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hoon EF, Chambless 1998 XNUMX ။ Sexual Arousability Inventory နှင့်လိင်စိတ် Arousability Inventory- တိုးချဲ့ခဲ့သည်ခုနှစ်တွင်: Davis က CM, Yarber WL, Bauserman R ကို, Schreer, G, Davis က SL (eds) ။လိင်-Related ဆောင်ရွက်ချက်များ၏လက်စွဲစာအုပ် Sage ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း: Thousand Oaks, CA; 71-74.74 ။
အီး, Everaerd W, Spiering M, Janssen ဂျေအလိုအလျောက်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အကဲဖြတ်: သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆီသို့ ဦး တည်
လိင်စိတ်နိုးထ၏မော်ဒယ်။ J ကိုလိင် Res ။ 2000;37: 8-23 ။
အီး, Vorst H ကို, ဖင်လန် P ကို, Bancroft ဂျေအဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး (SIS) နှင့်လိင်
စိတ်လှုပ်ရှားမှု (SES) Scales: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုင်းတာခြင်း
ယောက်ျား၌အသရေ။ J ကိုလိင် Res ။ 2002;39: 114-126 ။ [PubMed]
M, Bannister P, Brady M, Smith S.
နှင့်တိကျမှန်ကန် linear မှတ်ပုံတင်နှင့် ဦး နှောက်ပုံရိပ်တွေ၏ရွေ့လျားမှုဆုံးမခြင်း။ NeuroImage ။ 2002;17: 825-841 ။ [PubMed]
Jenkinson M, Smith S. ဦး နှောက်ပုံရိပ်များ၏ကြံ့ခိုင် affine မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ optimization နည်းလမ်း။ Med Image ကိုစအို။ 2001;5: 143-156 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE ။ အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု၏ Ventral striatal ထိန်းချုပ်မှု: စားသုံးမိအပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှု။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2004;27: 765-776 ။ [PubMed]
Khor SP, Hsu A. ပါကင်ဆန်ရောဂါကုသမှုတွင် levodopa ၏ဆေးဝါးနှင့်သိပ္ပံပညာနှင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ Curr Clin Pharmacol ။ 2007;2: 234-243 ။ [PubMed]
T က, Schweckendiek J ကို, Merz CJ, Tabbert K ကို Walter B, Kagerer S က။
အရေးပေါ်အသိအမြင်နှင့်လိင်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကိုလိင် Med ။ 2009;6: 3071-3085 ။ [PubMed]
Kringelbach ML, Berridge KC ။ အပျော်အပါးနှင့်ပျော်ရွှင်မှု၏အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomy ဆီသို့။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2009;13: 479-487 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kumakura Y, Danielsen EH, Reilhac A, Gjedde A, Cumming P. Levodopa effect အပေါ် [18F] fluorodopa ဦး နှောက်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း - ပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသူများ။ Acta Neurol Scand ။ 2004;110: 188-195 ။ [PubMed]
Lang PJ, Bradley MM, Cuthbert BN ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိရောက်သောရုပ်ပုံစနစ် (IAPS) - ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲနှင့်ထိရောက်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ။ Psychophysiology သုတေသနဌာန၊ ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ် - ဖလော်ရီဒါ၊ ၂၀၀၁ ။
M, Grey FA, ​​de Visser SJ, Franson KL, Schoemaker RC, Schmitt JA, et al ။
Psychomotor နှင့် talnetant တစ်ခုတည်းပါးစပ်ထိုး၏သိမြင်မှုသက်ရောက်မှု
(SB223412) ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ် haloperidol နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ J ကို Psychopharmacol ။ 2010;24: 73-82 ။ [PubMed]
JS, Stern ပာ JM ။ periaqueductal မီးခိုးရောင်၏ဆိုက်နှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတိကျတဲ့
ကြွက်များ။ ဦးနှောက် Res ။ 1998;804: 21-35 ။ [PubMed]
လူယာသည် SM, Bern GS, မွန်တဂူ PR စနစ်။ တစ်ဦး passive သင်ယူမှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ယာယီခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများလူ့ striatum ကိုသက်ဝင်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003;38: 339-346 ။ [PubMed]
LM, Ziebell S, Nopoulos P, Cassell M, Andreasen NC, Brumm အမ် anterior
cingulate cortex: MRI-based ဖျက်သိမ်းခြင်းနည်းလမ်း။ NeuroImage ။ 2006;32: 1167-1175 ။ [PubMed]
Menon V ကို, Uddin LQ ။ အလှည့်ကျပြောင်းခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း - insula လုပ်ဆောင်ချက်၏ကွန်ယက်ပုံစံ။ ဦးနှောက် Struct Funct ။ 2010;214: 655-667 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
KK, Chakraborty BS, Ganes DA, Hawes EM, Hubbard JW, Keegan DL, et al ။
haloperidol ၏ pharmacokinetics အတွက် intersubject အပြောင်းအလဲနှင့်
haloperidol လျှော့ချ။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 1989;9: 98-104 ။ [PubMed]
AL, Farde L ကို, D2-dopamine အဲဒီ receptor ထေို၏ Halldin C. အချိန်သင်တန်း
haloperidol ၏တစ်ခုတည်းပါးစပ်ဆေးများပြီးနောက် PET အားဖြင့်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ Psychopharmacology (Berl) 1992;106: 433-438 ။ [PubMed]
အက်စ်ဗန်အေ၊ ဘော့စ်စီ et al ။
ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သော cue-induced striatal dopamine ထုတ်လွှတ်မှု
ထကြွလွယ်သော - compulsive အပြုအမူတွေ။ ဦးနှောက်။ 2011;134: 969-978 ။ [PubMed]
Patton JH စတန်းဖို့ဒ်က MS, Barratt ES ။ အဆိုပါ Barratt Impulse စကေး၏ factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ J ကို Clin Psychol ။ 1995;51: 768-774 ။ [PubMed]
M က, Seymour B, Flandin, G, Dolan RJ, Frith CD ကို။ Dopamine-မှီခို
ခန့်မှန်းချက်အမှားအယွင်းများလူသားမြား၌ဆုလာဘ် - ရှာဖွေခြင်းအပြုအမူအခြေခံ။ သဘာဝ။ 2006;442: 1042-1045 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
B, Ruff CC, Blankenburg F, Kloppel S, Driver J, Dolan RJ ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
somatosensory ဆုံးဖြတ်ချက်ချအပေါ် dopaminergically ကမကထပြုခဲ့ဆုလာဘ်။ PLoS Biol ။ 2009;7: e1000164 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1993;18: 247-291 ။ [PubMed]
RC, Riley တစ် ဦး က, Wagner, G, Osterloh IH, Kirkpatrick J ကို, Mishra အေအဆိုပါ
erectile function ကို၏နိုင်ငံတကာအညွှန်းကိန်း (IIEF): တစ် multidimensional
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အကဲဖြတ်ဘို့စကေး။ Urology ။ 1997;49: 822-830 ။ [PubMed]
Ka, စမိုက် MR ။ ပါဝင်သောပါးစပ်သောက်သုံးသောပုံစံများ၏ဇီဝရရှိနိုင်လေ့လာမှုများ
levodopa နှင့် carbidopa တို့ကကော်လံ - ပြောင်းသည့် Chromatography ကိုအသုံးပြုသည်
လြှပျစစျရှာဖွေရေး။ Analyst, ။ 2000;125: 439-445 ။ [PubMed]
DV, Lecrubier Y, Sheehan KH, Amorim P, Janavs J, Weiller E, et al ။ The
Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI) - ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
နှင့်များအတွက်စနစ်တကျအဖြေရှာတဲ့စိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး၏ validation ကို
DSM-IV နှင့် ICD-10 ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998;59: 22-33 ။ [PubMed]
အဆိုတော် B၊ Toates FM ။ လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု။ J ကိုလိင် Res ။ 1987;23: 481-501 ။
Smith က SM ။ အစာရှောင်ခြင်းကြံ့ခိုင် automated ဦးနှောက်ထုတ်ယူခြင်း။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2002;17: 143-155 ။ [PubMed]
Spiering M, Everaerd W, Janssen E. လိင်စနစ်ကိုအဓိကထားသည်။ J ကိုလိင် Res ။ 2003;40: 134-145 ။ [PubMed]
Stewart ကဂျေ 1995 ။ ဘယ်လိုမက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးသီအိုရီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှလျှောက်ထားပါဘူးခုနှစ်တွင်: Bancroft J ကို (ed) ။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဆေးဝါးဗေဒ Elsevier Science BV: အမ်စတာဒမ်၊ ၃-၁၁.၁၁ ။
et al M, Bermpohl က F, Mouras H ကို, Schiltz K ကို, Tempelmann ကို C, Rotte M က။
erotic ရုပ်ပုံကြည့်ရှုစဉ်အတွင်း fMRI-subcortical နှင့် cortical နှိုးဆွ။ NeuroImage ။ 2008;40: 1482-1494 ။ [PubMed]
Wild GJS ။ Neurotische labiliteit gemeten volgens de vragenlijstmethode ။ ဗန် Rossen: အမ်စတာဒမ်; ၁၉၆၃ ။
MW၊ Behrens TE၊ Beckmann CF၊ Jenkinson M၊ Smith SM ။ Multilevel linear
Bayesian အခြသုံးပြီး FMRI အုပ်စုတစ်စုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့မော်ဒယ်။ NeuroImage ။ 2004;21: 1732-1747 ။ [PubMed]
Woolrich MW, Ripley bd, Brady M, Smith SM ။ FMRI အချက်အလက်များ၏ univariate linear မော်ဒယ်လ်အတွက်ယာယီ autocorrelation ။ NeuroImage ။ 2001;14: 1370-1386 ။ [PubMed]
Worsley KJ ။ ၂၀၀၁ ။ activation ပုံရိပ်များ၏စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာIn: Jezzard P၊ Matthews PM၊ Smith SM (eds) ။Functional MRI: နည်းလမ်းများမှနိဒါန်း Oxford University Press Inc မှနယူးယောက်၊ 251-270.270 ။
et al M, Brewer WJ, Harrison BJ, Fornito A, O'Keefe GJ, Olver J ။
antipsychotic-နုံပထမဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် anterior cingulate activation
schizophrenia ။ Acta Psychiatric Scand ။ 2007a;115: 155-158 ။ [PubMed]
M, Harrison BJ, Wood SJ, Fornito A, Wellard RM, Pujol J, et al ။
အတွက် medial တိုကျရိုကျ cortex ၏ functional နှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးပွောငျးလဲ
obsessive-compulsive ရောဂါ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007b;64: 946-955 ။ [PubMed]
Yucel M, Lubman DI, Harrison BJ, Fornito A, Allen NB, Wellard RM, et al ။ 2007c ။ opiate စွဲအတွက် dorsal anterior cingulate ဒေသ၏တစ် ဦး ကပေါင်းစပ် spectroscopic နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု 12611691-702 ။ [PubMed]